Rajo wanaagsan iyo riyo cusub - Sheekooyinka guusha
Cabdi Ducaale, Shaahle, Hargeysa ​
Mudane Cabdi Ducaale, oo 23 sano jira, wuxuu ku riyooday inuu tago Europe si uu u helo nolol wanaagsan. Fursado la'aanta dhaqaale ee ka jira magaalada Hargeysa awgeed ayuu sannadkii 2012-kii wuxuu isku dayay in uu gaaro Yurub isagoo safar khatar badan ku maray Itoobiya, Suudaan iyo Liibiya.
Waxa uu ku sugnaa Liibiya muddo ka badan seddex sano oo isku dayayay in uu helo waddo uu uga gudbo badda Mediterranean. Isku day badan kadib, ma u suurto galin arrintaas. Ugu dambeyntii, wuxuu riyadiisa ka door biday inuu dib ugusoo noqdo Somaliland.
Kadibna wuxuu ka warhelay barnaamijka Kaah International ee Adeegyada Lacag bixinta (KIMS), kaasoo loogu talagalay ganacsatada billowga ah.
Si uu u gaadho qorshihiisa ganacsi, sannadkii 2016-dii waxaa ay siisay KIMS US $ 1,600 oo amaah ah taasoo uu ku billaabay ganacsi makhaayad cusub oo kutaalla Hargaysa. Ganacsigii ayaa noqday mid guul ku dhisan. Waxa uu hadda shaqaaleeyay 3 qof oo cusub wuxuuna iibiyaa in ka badan 600 koob oo shaah ah maalintii.
Isagoo ka hadlayay khibradiisa, Ducaale wuxuu yidhi; "Ma aanan ogeyn sida ay u adagtahay in aan gaaro Yurub iyo in riyadayda ay si dhakhsa ah isugu badali cabsi, Allaa mahadle waxaa la ii soo bandhigay KIMS iyo taageerada ay bixiso, iyaga ayaan ka billaabay ganacsigan.
Tani waxay badeshay noloshayda, hadda waxaan noqday xubin firfircoon bulshada dhexdeeda. Ma ahan oo keliya in aan helo dakhli aan ku daboolayo baahidayda, laakiin waxaan u abuurayaa shaqooyin dadka kale."
"Hadda waxaan heystaa riyo cusub. Taasi waa in aan ku guulaysto ganacsigan iyo in aan halkan ka sameeyo qoys." Ducaale
KIMS Waxa lagu soo bandhigay Qaamuuska Maaliyadda...